Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Pig Brain (37758-47-7) Ndị na-emepụta - Phcoker
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) ezi ụbụrụ (37758-47-7)
A na-eji ntụ ntụ GM1 eme ihe iji na-emeso neonatal hypoxic-ischemic brain mmerụ, ọrịa Parkinson… ..
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) ezi ụbụrụ (37758-47-7) video
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) ezi ụbụrụ (37758-47-7) Nkọwapụta
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) ụbụrụ ezi (37758-47-7), aha dị mkpụmkpụ nwere ike ịbụ GM1, nke sitere na ụbụrụ ezi ma bụrụ onye otu usoro ganglio nke gangliosides nke nwere otu sialic acid fọdụrụ.
GMl nwere ike ịkwalite mgbake nke ọrụ nyocha mgbe ọnyá nke usoro nhụjuanya nke etiti dị iche iche kpatara, na-akwalite neuroplasticity. Ahụmahụ na-egosi mmerụ GMl vascular ụbụrụ, ụbụrụ traumatic iji weghachi mkpụrụ ndụ akwara na mmerụ ahụ ọkpụkpụ nwere mmetụta nchebe ma kwalite ọrụ nke cell.
Usoro ikpe-azu nke mbu nke II gosiri na ọ nwere ike belata neurotoxicity oxaliplatin (ININ). Ma, ọ bụghị certificated site frasi III ikpe. A chọrọ usoro nke atọ nke atọ iji nyochaa mmetụta na nchekwa nke monosialotetrahexosylganglioside Sodium ogwu maka ọgwụ mgbochi na ọrịa cancer.
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) ezi ụbụrụ (37758-47-7) Specifications
Product Name Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) ezi ụbụrụ
Chemical Aha Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (ụbụrụ Porcine)
Ma ọ bụ GM1
molekụla Fnhazi C73H134N4O31
molekụla Wasatọ 1563.85
Nkịtị Monoisotopic 1563.85
Mgbu Point N / A
Ọkara Ndụ nke Ndụ /
Agba Na-acha ọcha na-egbuchapu ntụ ntụ
Solubility chloroform / methanol (9: 1): 10 mg / mL, doro anya, na-enweghị ntụpọ
nchekwa Tigwe -20 ° C
Antinye Ndị na-anabata ya maka ọnyá cholera nke na-agbakọta na ụbụrụ na ngwụsị lipidosis na-abaghị uru.
Ihe nyocha N'ime Ụkpụrụ Nlezi ụlọ
Character White ma ọ bụ ọcha ntụ ntụ; ntakịrị ihe na-esi ísì ụtọ; mmiri. Ngwaahịa a nwere ike ịmepụta mmiri na mmiri, nke dị ntakịrị etisasịwo na methanol, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịkụnye ya na ethanol anhydrous.
Mmegharị nsụgharị agba nke 1 Were nyocha 0.2ml nyocha ihe n'okpuru mkpebi nkwekọrịta, gbakwunye 2ml mmiri, wee tinye hydrochloric acid solution (hydroquinone 0.2g, gbakwunye 10ml mmiri, gbanwee hydrochloric acid 90ml, gbakwunye 0.1mol / L Copper sulfate solution 0.25ml, Preservation refrigerator) 2ml, mmiri na-ekpo ọkụ ọkụ maka minit 15, ihe na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo, na mmanya mmanya 5ml Na-emegharị egwu, mmanya mmanya adịghị acha anụnụ anụnụ.
Mmegharị nsụgharị agba nke 2 Were ngwaahịa a banyere 20mg, gbakwunye ọkụ mmiri acetic acid 1ml, mmiri ọkụ bat chaa chaa chaa, gbakwunye nyocha nke mmiri chloride nke 1, na mmiri ọkụ na-asa mmiri na mgbidi mgbidi ji nwayọọ nwayọọ tinye sulfuric acid 1ml, nke mere na ngwọta n'ime okpukpu abụọ , ọnụọgụ abụọ-mmiri kwesịrị ịbụ aja aja
Saltium nnu Ihe ngosipụta nke nchịkwa sodium nke ngwaahịa a (mbipụta 2015 nke China bụ 0301).
Chromatography nke mmiri (LC) Na graphs chromatographic e dere n'okpuru mkpebi mkpebi, oge nkwụsị nke ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ngwọta ule kwesịrị ikwekọ oge nkwụsị nke ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ngwọta nchịkwa.
Infrared spectroscopy Igwe onyonyo ọkụ nke infrared nke ngwaahịa a kwesiri ikwekọ na map nke ngwaahịa akara (mbipụta 2015 nke Chinese Pharmacopoeia anọ 0402).
Ịdị ọcha na agba nke ngwọta Kwesịrị ịkọwa ya n'enweghị ihe ọhụụ; ọ bụrụ na ọ bụ ígwé ojii, ọ gaghị adị okpukpu karịa mmiri mmiri nke ụbụrụ na-edozi ahụ. Ọ bụrụ na nsụgharị nsụgharị ekwesịghị ịdị omimi karịa Yellow N'ihe 1th colorimetric solution.
Nnukwu mkpebi siri ike Ihe ngwọta a gwụrụ ga-edozi ma doo anya mgbe okpomọkụ dị elu, enweghị mmiri ara ehi, ọ dịghị mmiri ozuzo
Ihe na-eche echiche (protein dị iche iche) ≤50000
Ọnụ Sialic acid Dika akuku akwukwo akuku, mmiri nke nwere acid kwesiri ibu 19.0 ~ 21.0%
njikọ bekee Sialic acid ≤0.3%; GD3, GD1a, amaghị adịghị bụ ≤ 0.5%; adịghị ọcha na ≤2.0%
Nnukwu arọ dị arọ dị arọ ≤0.5%
Ihe nkwụsị nke ala Methanol ≤ 0.1%; acetone ≤ 0.3%; Trichloromethane ≤0.003%
Ọkụ ọkụ ≤5.0%
Ngwá ígwè ≤20ppm
Ọrịa dị njọ Iwu nhazi
Egwuregwu Antihypertensive Kwesịrị ịdị ka iwu (ọtụtụ nchịkọta nke nlekọta)
Pyrogen Kwesịrị ịdị ka iwu (ọtụtụ nchịkọta nke nlekọta)
Ngwunye nke ekwesighi Ọnụ ọgụgụ nje bacteria aerobic kwesịrị ịbụ <100cfu / g, na ọnụ ọgụgụ nke ebu na yist kwesịrị ịbụ <50cfu / g
raw MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) ntụ ntụ (37758-47-7) Nkọwa
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (37758-47-7), aha dị mkpirikpi nwere ike ịbụ GM1, nke a napụtara site na ụbụrụ ụbụrụ ma bụrụ otu n'ime usoro ganglio nke gangliosides nke nwere otu sialic acid.
GM1 nwere ike ịkwalite mgbake nke ọrụ akwara mgbe ọnya nke usoro ụjọ nke etiti nke ọtụtụ ihe kpatara ya, na-akwalite neuroplasticity. Nlere na-egosi GM1 vascular ụbụrụ mmerụ ahụ, ụbụrụ traumatic iji weghachi mkpụrụ ndụ akwara na ọnya ọnya ọnya nwere mmetụta nchekwa ma kwalite ọrụ nke sel.
MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) ntụ ntụ (37758-47-7) Mechanism of actions?
GM1 (monosialotetrahexosylganglioside) “prototype” ganglioside, bụ onye so na usoro ganglio nke gangliosides nke nwere otu siidic acid fọdụrụ. GM1 nwere njirimara physiological dị mkpa ma na-emetụta plastik neuronal yana usoro nrụzi, yana mwepụta nke neurotrophins n'ụbụrụ. E wezụga ọrụ ya na physiology nke ụbụrụ, GM1 na-arụ ọrụ dị ka ebe ejikọtara nsị ọgbụgbọ na ọnya E. coli-labile enterotoxin (afọ ọsịsa nke ndị njem).
uru of MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) ntụ ntụ (37758-47-7)
GM1 Ganglioside bụ onye so na ezinụlọ ganglioside nke a na-eji na ọtụtụ mba, a na-ewerekwa ya dịka ọgwụgwọ ọzọ na-ekwe nkwa maka igbochi ọtụtụ ọrịa ọrịa na-adịghị na ọrịa, gụnyere ọrịa nchịkwa nke cerebral. E gosipụtara mmetụta ọgwụgwọ nke GM1 ma na ndị okenye na ndị toro eto na-esote ihe na-emetụta ụbụrụ.
-atụ aro MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) ntụ ntụ (37758-47-7) Ọgwụgwọ
A na-enye ọgwụ ọgwụ na ọgwụ nke 20-40 mg kwa ụbọchị site na ogwu intravenous ma ọ bụ jiri nwayọ nwayọ intramuscular dị ka ndụmọdụ dọkịta si dị. N'ime nnukwu usoro nke mgbanwe mgbanwe ọrịa: ejiri ọgwụ mee ihe na ọgwụ 100 mg kwa ụbọchị site na ogwu ogwu; Mgbe izu 2-3 gachara, na-ejigide ego nke 20-40 mg kwa ụbọchị maka izu isii, a na-enye ọgwụ izizi nke 500-1000 mg site na igba ogwu n'akwara maka ọrịa Parkinson; kemgbe ụbọchị nke abụọ, a na-eji ọgwụ eji ọgwụ 200 mg eme ihe kwa ụbọchị site na subcutaneous, intramuscular injection ma ọ bụ nsị nsị maka izu 18 na-emekarị. mgbe a na-enye ọgwụ a site na Subcutaneous ma ọ bụ intravenous ogwu, ọ ga-agbaze ma gbanye ya na mmiri maka ogwu ruo mgbe ịta ahụhụ nke 10 mg / ml na; mgbe Intravenous drip, a hụrụ ọgwụ ọjọọ n'anya ma gbanye ya na 0.9% sodium chloride injection ma ọ bụ 5% ogwu glucose.
mmetụta of MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) ntụ ntụ (37758-47-7)
Mmetụta dị na GM1 ntụ ntụ bụ isi mmeghachi omume ọkụ ọkụ mgbe o jiri ya.